Maalin: Janaayo 29, 2019
Maareeyaha guud iyo gudoomiyaha guddiga maareeyayaasha maamulka maddaarka Funda Ocak, ayaa warbixin ka siiyay mashruucyada socda ee qeybtiisa ku leh akoonka rasmiga ah ee twitter-ka. Waa kuwan saamiyada Maareeyaha Guud Ocak: [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa ApaydınMagaalada Konya, Xarunta YHT iyo Kayacik Logistics Center, oo hada dhismaheedu socdo, ayaa baaritaano ka sameysay oo ka heshay macluumaadka dhinacyada ay daneynayaan. Saldhigga Konya YHT wuxuu ku yaalaa Konya Wheat Market [More ...]
Xawaaraha Speed ​​ee baabuurta Kahramanmaraş waxay kordhisaa 82
Kahramanmaraş si loo fududeeyo isu socodka magaalada 1-Febraayo, 2019 iyada oo ku mataleysa xaddiga xawaaraha gawaarida ayaa la kordhiyay oo lagu sheegay 82. Kahramanmaraş Waaxda Adeegyada Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalooyinka [More ...]
Hüseyin Sözlü, Duqa degmada Adana Magaalo-weynaha, ayaa hirgaliyay mashruuca ka dhigaya gaadiidka lugeeyayaasha inay amaan iyo raaxo ku yeeshaan degmada 3. Dhibaatada taraafikada magaalada iyadoo la fulinayo mashaariicda gaadiidka [More ...]
K @ bin loogu talagalay maaraynta mihnadda ee Gebze
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay bilowday inay ka shaqeyso khadka tareenka ee la saadaaliyay khadka khadka Gebze-Darıca. Barta Macluumaadka ee Kocaeli (K @ BİN) waxaa laga sameeyay barxada Magaalada Gebze si loogu wargaliyo muwaadiniinta mashruuca. K @ THOUSAND, muwaadiniin leh jilitaan [More ...]
Meelaha Metrooga ee lagu dhisi doono Antalya waa 25 Km Long
Duqa magaalada Menderes Türel wuxuu cadeeyay in khadka tareenka laga dhisi doono Antalya uu dhererkiisu ahaan doono 25 km. Menderes Türel, Duqa Magaalada Antalya ee Magaalo Weynta Magaalada, ayaa sheegay in Konyaaltı-Varsak iyo Khadadka Lara Metro ee la qorsheeyay in la dhiso ka dib 2019 ay aad ugu haboonaan doonaan Antalya. [More ...]
RayHaber 29.01.2019 Warbixinta Shirka
Khadka Malatya-Çetinkaya Km: 70 + 600 Wadada Wadada Weyn ee Dhismaha Shaqada Nadiifinta Howlaha Nadiifinta Adeegyada waxaa lagu qaadi doonaa Guryaha Adeegga Eryaman Guryaha Kaabayaasha Gaaska dabiiciga ah Adeegga Shaqaalaha waxaa qaadi doona La-Taliyaha Sharciga. [More ...]
Tareenka Xawaaraha Sare ee Jidka Tareenka ee Malatya
Ku xigeenka AKP Malatya iyo xubin ka tirsan MKYK Öznur Çalık ayaa sheegay in tareenka xawaare dheer uu ku imaan doono saldhiga Malatya ee wadada tareenka xawaare dheer ku dhexeysa Malatya iyo Elazığ. [More ...]
Gaffar Okkan Street waa xiran yahay taraafikada Eskisehir
Gaffar Okkan Street ayaa loo xiri doonaa taraafikada sababtoo ah howlaha kaabayaasha ee ay fulin doonto Agaasinka Guud ee OLD iyada oo loo eegayo baaxadda howlaha taraafikada ee hadda socda ee Eskişehir. Gaffar Okkan Street 30 Janaayo 2019 taraafikada Arbacada [More ...]
Dowladda Manisa Metropolitan, 5 -ta sano ee hartay waajibka dusha sare iyo shaqada muhiimka ah ee Alaşehir 33 milyan oo gini ayaa maal gashan. Quful waddooyinka xiran iyo dayaca waqti ka dib [More ...]
Maanta, 29 January 1899 Dumarka Port Haydarpaşa waxaa la siiyay shirkadeyda Jarmalka ee tareenka ee Anatolian Railway. 29 Janaayo 1993 wuxuu bilaabay inuu wax ka qabto tareenka korantada ee Ankara-Haydarpaşa.